ထိုင်းနိုင်ငံသား တစ်ဦးထံမှ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၉ဝဝ ခန့် တန်ဖိုးရှိ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ရာနိုက်များ ? - Yangon Media Group
ထိုင်းနိုင်ငံသား တစ်ဦးထံမှ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၉ဝဝ ခန့် တန်ဖိုးရှိ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ရာနိုက်များ ?
တာချီလိတ်၊ ဇွန် ၃
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့ မြန်မာ-ထိုင်းအမှတ်(၂)ချစ်ကြည် ရေးတံတား၌ ထိုင်းနိုင်ငံသားမောင်းနှင်လာသော မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ပေါ်မှ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၉ဝဝ ခန့် တန်ဖိုးရှိ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ရာနိုက်များ ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း မူးယစ်တပ်ဖွဲ့ စုမှ သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ (ONCB) အဖွဲ့ နှင့် သတင်းဖလှယ်ဆက်သွယ်ချက်အရ မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်း ရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ တပ်ဖွဲ့စု(၃ဝ)တာချီလိတ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများပါဝင် သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် သက်သေများနှင့်အတူ ဇွန် ၂ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲက တာချီလိတ်မြို့ မယ် ခေါင်ရပ်ကွက် မြန်မာ-ထိုင်းအမှတ် (၂)ချစ်ကြည်ရေးတံတားတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ တာချီလိတ်သို့ ထိုင်းနိုင်ငံသား Mr.Sawat Kaeodam မောင်းနှင်ဝင်ရောက်လာသည့် ထိုင်းနံပါတ် 70 ——-MESA FL အမျိုးအစား အဖြူရောင် ၁ဝ ဘီးယာဉ်အား ရပ်တန့်စစ်ဆေးရာ နောက်ခန်းတွင် အနက်ရောင်မိုးကာ ဖြင့်အုပ်လျက် မသင်္ကာဖွယ်သံပုံးများ တွေ့ရှိသဖြင့် မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု (၃ဝ)တာချီလိတ်သို့ မောင်းနှင် ခေါ်ဆောင်၍ ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးရာ အနက်ရောင်သံပုံးများဖြင့်ထည့်လျက်ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ရာနိုက်၊ အလေးချိန် ၅ဝ ကီလိုခန့်စီပါ ပုံး ၃ဝဝ၊ စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁၅ တန်ခန့် (ဒေသတန်ဖိုး ကျပ်သိန်းပေါင်း ၉ဝဝ ခန့်)အားလည်းကောင်း၊ Passport စာအုပ်နှင့် လက်ကိုင်ဖုန်း တစ်လုံးတို့ကို တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ရာနိုက်များနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသော Mr. Sawat Kae-odam (၄၂)နှစ်၊ ဘန့်ရှောင်ရွာ ကျင်းရှဲန်မြို့နယ် ချင်းရိုင်းခရိုင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ နေသူအား တာချီလိတ်မြို့မရဲစခန်း က (ပ)၁၆၉/၂ဝ၁၈၊ ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ – ၃၇ နှင့် ၃၈ အရ အရေးယူဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရသည်။
ကွန်တိန်နာယာဉ် အရှိန်လွန် တိမ်းမှောက်ပြီး လမ်းဘေး သစ်ပင်ဝင်တိုက် နှစ်ဦးသေ၊ လေးဦး အတွင်း?